"အမြန်ရောင်းမည်" တိုက်ခန်း အရောင်း (သိန်း 850) ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ယမုံနာလမ်းမပေါ် (ဇေယျာသီရိ(၇)လမ်းနှင့်အောင်ရတနာလမ်းကြား) မြေညီထပ်၊ 15ပေ x 50ပေ၊ အကြမ်းထည် Agent 09765098827 တိုက်ခန်း အရောင်း (သိန်း ၇၀၀) ၅လမ်း၊ ၆လွှာ၊ ၂၂ ပေ x ပေ ၅၀ အပေါ်ဆုံးထပ် ပါကေးခင်း၊ နောက်ဖေးပြင်ဆင်ပြီး Agent 09765098827 ...
- Shared by Lotaya Property Service Read More
လမ်းမတော် လုံးချင်းအရောင်း (သိန်း 27000) (အမြန်ရောင်းမည်)
လမ်းမတော် လုံးချင်းအရောင်း (သိန်း 27000) (အမြန်ရောင်းမည်) လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ လမ်းကျယ်၊ ၈ထပ်ခွဲတိုက်၊ ပေ 25 x ပေ 50 ၊ 1MBR၊ Aircon၊ Lift၊ ပါကေခင်း၊ ပြင်ဆင်ပြီး အကျိုးဆောင် 09 765098827 ...
🎉🎉** သာကေတမြို့နယ်ရှိ လမ်းမကြီးနှင့်နီးသော နေထိုင်ရန် သင့်တော်သည့် ပေအကျယ်တိုက်ခန်းအရောင်းစာရင်းများ..**🎉🎉
🎉🎉** သာကေတမြို့နယ်ရှိ လမ်းမကြီးနှင့်နီးသော နေထိုင်ရန် သင့်တော်သည့် ပေအကျယ်တိုက်ခန်းအရောင်းစာရင်းများ..**🎉🎉 1. သာကေတ၊ ထူပါရုံလမ်းသွယ် ☄️ ပေ(18×55) Normal bedrooms 2, ကိုရီးယားပါကေးခင်း 2F 💰445 သိန်း(ညှိနှိုင်း) ( AS-040158) 2. သာကေတ၊ ဗန္ဓုလတံတားနှင့် မင်းနန္ဒာလမ်းမအနီး ☄️ ပေ(18×54) Hall,RC ခင်း 1F 💰သိန်း 500(ညှိနှိုင်း) ( AS-042285) 3. သာကေတ၊ ရှုခင်းသာလမ်းမကြီးအနီး သုမနလမ်းသွယ် လမ်းသန့် ☄️ ပေ(19×54) Normal bedroom 1, ကြွေခင်း 1F 💰သိန်း 570(ညှိနှိုင်း) ( AS-048563 ************************************************************* 👇👇 အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ်လေးနှိပ်ပြီး ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 👇👇 ☎️☎️☎️Tel : 09- 5148486/09-785148486/01-9317833 📞📞 24 Hour Hot Line : 09- 450058012 🌐🌐 Website : www.goldenpeacockmm.com ◾️◾️ #GoldenPeacockRealEstate ## ...
* ရုံးခန်းဖွင့်​ရန်​နှင့်​ စီးပွား​ရေးလုပ်​ငန်းလုပ်​ကိုင်​ရန်​ အထူး​ကောင်းမွန်​​သောနေရာမှ အဌား​လေးနှင့်​ မိတ်​ဆက်​​ပေးပါရ​စေရှင်​....*
* ရုံးခန်းဖွင့်​ရန်​နှင့်​ စီးပွား​ရေးလုပ်​ငန်းလုပ်​ကိုင်​ရန်​ အထူး​ကောင်းမွန်​​သောနေရာမှ အဌား​လေးနှင့်​ မိတ်​ဆက်​​ပေးပါရ​စေရှင်​....* ပုစွန်​​တောင်​မြို့နယ်​၊ ပုစွန်​​တောင်​လမ်းမကြီး​ပေါ်​မေးတင်​တွင်​ မျက်​နာစာအလျား (90)နှင့်​ အနံ (150)​ပေါ်တွင်​​ဆောက်​လုပ်​ထား​သော အကျယ်​ (33000Sqft)ရှိ RC(10)ထပ်​အား ရုံးခန်းလုပ်​ရန်​​သော်​လည်း​ကောင်း၊ ​ကျောင်းဖွင့်​ရန်​​သော်​လည်း​ကောင်း အထူးသင့်​​လျော်​သည့်​ အဆင့်​မြင့်​ပြင်​ဆင်​ပြီး​သော လူ (13)​ ယောက်​ဆန့်​ ဓာတ်​​လှေကား (2)စီးပါသည့်​အပြင်​ ကားပါကင်​ အစီး (40) ရပ်​နိုင်​ပြီး ​ရေ​လှောင်​ကန်​ (40000) ဂါလံဆန့်​ ပါရှိသည့်​အတွက်​ လုပ်​ငန်းလုပ်​ရန်​အထူးသင့်​​လျော်​​သော​ကြောင့်​ မိတ်​​ဆွေများအား သတင်း​ကောင်း​လေး ပါးလိုက်​ပါသည်​။ > ဈေးနှုန်း - (600 သိန်း) Mobile - 09799991090, 09799991092, 09799991095 Viber - 09253251133 Gmail - rabbitfamilyrealestate@gmail.com Website - rabbitfamily.com # Real Estate # # Property # # Land & ...
တိုက်ခန်းအရောင်း (သိန်း 1600)
တိုက်ခန်းအရောင်း (သိန်း 1600) လသာမြို့နယ်၊ စဉ့်အိုးတန်းလမ်း ၊ ၇လွှာ(တမိုးကျန်) 18 ပေ x ပေ 60 ၊ 1MBR၊ Aircon၊ Lift၊ ပြင်ဆင်ပြီး အကျိုးဆောင် 09 765098827 ...
￼ ရောင်းမည် လိပ်စာ-ဒုတိယထပ်၊ရွှေအုတ်ဂူ ၆လမ်း၊၈ရပ်ကွက်၊သာကေတ အကျယ်-18' 54' Master room၁ခန်း၊single room ၁ခန်း ဈေးနှုန်း-470သိန်း ဆက်သွယ်ရန်-0943083990 ...
- Shared by သိန်း ၅၀၀ အောက် အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအ၀ယ် Read More
🏡ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ဈေးနှန်းသင့်ကွန်ဒိုအငှါး🏡 -------------------------------------------------- 🚶‍♀️🏡သွားလာရလွယ်ကူပြီး အချက်အချာသောနေရာတွင် ရှိတဲ့ အပြင် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူများနှင့် ရုံးခန်းအများအပြားရှိပြီး ဈေးနုန်းလဲသင့်သောကြောင့် ရုံးခန်းဖွင့်ရန်အထူးသင့်လျော်သော ကွန်ဒိုငှါးရန်ရှိပါတယ်ရှင့် ......🏡🍀 ------------------------------------------------------------------------------ 💁‍♀️ကွန်ဒိုတွင် ပါဝင်မှုများ -------------------------- 🍀 မာတာအိပ်ခန်း (၁) ခန်း 🍀 ရိုးရိုးအိပ်ခန်း (၂) ခန်း 🍀 အဲကွန်း 🍀 အကျယ် (1600) စတုရန်းပေ 💰💰တလငှါးရမ်းခ (10) သိန်း💰💰 ------------------------------------------------------------- 🎉👉 အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များကိုဆက်သွယ်စုံးစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်... 👇👇👇 📞 09 797 990 880 📞 09 440 9988 40 📞 09 440 9988 50 📣 ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ - အမှတ် (၈၁၉)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် လှည်းတန်းလမ်း ထောင့်၊ ...
တိုက်ခန်းအရောင်း (သိန်း ၈၅၀)
တိုက်ခန်းအရောင်း (သိန်း ၈၅၀) လသာမြို့နယ်၊ မဟာဗနုလလမ်းနှင့်လမ်းမတော်လမ်းထောင့် ၄လွှာ 13ပေ x 50 ပေ၊ Air-con 1လုံး၊ အခန်း(၂)ခန်း ပြင်ဆင်ပြီး အကျိုးဆောင် 09 765098827 ...
မင်္ဂလာပါ Golden Land Myanmar Property Service အိမ်ခြံမြေ မှ Luxury Class Condominium အခန်းကောင်းလေး ဌားပါမည် ( အသစ်စက်စက်) လူကြီးမင်းတို့အတွက် အကောင်းဆုံး နေရာ အကောင်းဆုံးသော Luxury Condominium တစ်ခုရဲ့ အကောင်း စားအခန်းကောင်းလေးတစ်ခု နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ် Hill Top Vista Luxury Condominium မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမ ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီးအနီး နီနီ ဓာတ်ခွဲခန်းအနီး City Mall Bank Market တို့အနီး အကျယ် (1074) စတုရမ်းပေ (7 floor) River View လူကြီးမင်းတို့နဲ့အသင့်တော်ဆုံးသောနေရာကောင်းတခုမှာ တည်ရှိပြီး အကောင်းဆုံးသော Design အဆင့်မြင့်အသုံးအဆောင်ပစည်းများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီး ကျယ်ဝန်းသော master bedroom (1) ခန်း ရိုးရိုးအိပ်ခန်းကျယ် (1) ခန်း ဧည့်ခန်းကျယ် (1) ခန်း ထမင်းစားခန်း ကျယ်ဝန်းသော မီးဖိုခန်း သီးသန့် ရေချိုးခန်းအိမ်သာ (1) စုံ maid room (1) ခန်း တို့ပါဝင်ပြီး ရေပူ ရေအေး prusher pump water purify system တို့ပါဝင်ပြီး Condominium ရဲ့ facilities မှာပါဝင်တာကတော့ - swimming pool - Gym - ...
- Shared by Golden Land Myanmar Property Read More
တိုက်ခန်းအရောင်း (သိန်း 1600) လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ပေ၂၅ x ပေ၅o ၊ ပထမထပ် ပြင်ဆင်ပြီး၊ 1MBR၊ Aircon -2 အကျိုးဆောင် 09 765098827 ...
တိုက်ခန်းအငှား (၇ သိန်း)
တိုက်ခန်းအငှား (၇ သိန်း) ၁၇ လမ်း၊ ၄လွှာ၊ ပေ၂၅ x ၅၀ပေ၊ 1MBR၊ 1 BR ပြင်ဆင်ပြီး၊ ပရိဘောဂပါ၊ Aircon ၃လုံး၊ Lift အကျိုးဆောင် 09 765098827 ...
Gloden City Condo room for rent #2200USD Located Block 7, Yankin Road, near Myanmar Plaza and Sedona Hotel, Yankin Township, Yangon. - 1500 Sqft - 1 Master Bedroom -2Single Bedrooms - Fully Furnished - Lower Floor - Included #all #Utilities #Bill - Swimming Pool - Gym - Carparking - Security - 24Hr Generator Backup - Play Ground - Many Restaurant in this area Rental Price - 2200 USD ( all included bill ) Ph - 09779771193 Ph - 0943077610 ( viber and whatsapp ok) Ph - 09420718183 Ph - 09697999979 I have many apartments, condo, land and house, warehouse, land only , office ,ground floor for your business and etc..... So, please contact me if you need anything. #I-will-take-agent fee.😊😊 https://www.facebook.com/myatsupan.realestate/ ...
တိုက်ခန်းအငှား (၅ သိန်းခွဲ)
တိုက်ခန်းအငှား (၅ သိန်းခွဲ) ၂၃ လမ်း၊ ၆လွှာ၊ ပေ၂၅ x ၄၀ပေ၊ 1 BR၊ ပြင်ဆင်ပြီး ပရိဘောဂပါ၊ Aircon 2လုံး၊ Lift အကျိုးဆောင် 09 765098827 ...
Mini Condo for rent #900USD Located on Pansodan Road, near Kan Taw Gyi Lake and Yadanar Myaing Condo, Mingalar Taung Nyunt Township, Yamgon. - 1250 Sqft - 1 Master Bedroom - 1 Single Bedroom - High Floor - Lift - No Generator - Fully Furnished Rental Price - 900 USD ...
တိုက်ခန်းအငှား (၈ သိန်း)
တိုက်ခန်းအငှား (၈ သိန်း) ၁၄လမ်း၊ ပေ၂၅ x ၄၅ပေ၊2BR၊ ပြင်ဆင်ပြီး ပရိဘောဂပါ၊ Aircon ၃လုံး၊ Lift အကျိုးဆောင် 09 765098827 ...
🎉🎉** တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ Main လမ်းမကြီးနှင့်နီးပြီး သွားလာရလွယ်ကူသော ဈေးနှုန်းသင့်သည့် ပေအကျယ်တိုက်ခန်း အရောင်းစာရင်းများ..**🎉🎉
🎉🎉** တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ Main လမ်းမကြီးနှင့်နီးပြီး သွားလာရလွယ်ကူသော ဈေးနှုန်းသင့်သည့် ပေအကျယ်တိုက်ခန်း အရောင်းစာရင်းများ..**🎉🎉 1. တောင်ဥက္ကလာပ၊ ဓမ္မရာဇာလမ်းသွယ် သစ္စာလမ်းကျောကပ် ♦️ ပေ(18×55) Normal bedrooms 2, ကြွေခင်း 3F ♦️သိန်း 400(ညှိနှိုင်း) ( AS-047566) 2. တောင်ဥက္ကလာပ၊ ယဿဝတီလမ်းမပေါ် သံသုမာအနီး ♦️ ပေ(18×55) Hall, RC ခင်း 3F ♦️425 သိန်း(ညှိနှိုင်း) ( AS-048356) 3. တောင်ဥက္ကလာပ၊ သုမင်္ဂလာလမ်းမပေါ် နန္ဒဝန်ဈေးအနီး ♦️ ပေ(18×55) Hall, RC ခင်း 3F ♦️သိန်း 680(ညှိနှိုင်း) ( AS-044326) 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 👇👇 အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ်လေးနှိပ်ပြီး ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 👇👇 ☎️☎️☎️Tel : 09- 5148486/09-785148486/01-9317833 📞📞 24 Hour Hot Line : 09- 450058012 🌐🌐 Website : www.goldenpeacockmm.com ◾️◾️ #GoldenPeacockRealEstate ## ...
🌸 စက်တင်ဘာလအစ 🌸 🙏🏻မင်္ဂလာလေးပါ 🙏🏻
🌸 စက်တင်ဘာလအစ 🌸 🙏🏻မင်္ဂလာလေးပါ 🙏🏻 🏠 ရွိုင်ရယ်ထွန်းသစ္စာအိမ်ခြံမြေကို အားပေးကြတဲ့ 💁‍♀️ customer များ ကျေးဇူး အထူးပါ 🤗 🏠 အိမ်ခြံမြေ နှင့်ပတ်သက်လျှင် ရွိုင်ရယ်ထွန်းသစ္စာအိမ်ခြံမြေကို စိတ်ချယုံကြည်စွာအပ်နှံနိုင်ပါပြီ 🤝 💯 " တိကျမှန်ကန် မြန်ဆန်တာ ရွိုင်ရယ်ထွန်းသစ္စာ “ 📞 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 ...
🎉🎉** သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ လူနေထိုင်ရန်သင့်တော်ပြီး သွားလာရလွယ်ကူသော ပေအကျယ်တိုက်ခန်းအရောင်းစာရင်းများ..**🎉🎉
🎉🎉** သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ လူနေထိုင်ရန်သင့်တော်ပြီး သွားလာရလွယ်ကူသော ပေအကျယ်တိုက်ခန်းအရောင်းစာရင်းများ..**🎉🎉 1. သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ဇောတိကလမ်းသွယ် (၁၆)ရပ်ကွက်သန့် 💥 ပေ(20×40) Normal bedroom 1, ကြွေခင်း 1F 💥သိန်း 490(ညှိနှိုင်း) ( AS-044237) 2. သင်္ဃန်းကျွန်း၊ အောင်ရတနာဆေးရုံအနီး (၁၆)ရပ်ကွက်သန့် 💥 ပေ(18×55) Hall, RC ခင်း 1F 💥သိန်း 620(ညှိနှိုင်း) ( AS-046801) 3. သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ဗိုလ်တေဇလမ်းသွယ် သုဝဏ္ဏဈေးအနီး 💥 ပေ(19×54) Normal bedrooms 2, ကိုရီးယားပါကေးခင်း, 💥ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ 4F 745 သိန်း(ညှိနှိုင်း) ( AS-043490) ............................................................................ 👇👇 အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ်လေးနှိပ်ပြီး ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 👇👇 ☎️☎️☎️Tel : 09- 5148486/09-785148486/01-9317833 📞📞 24 Hour Hot Line : 09- 450058012 🌐🌐 Website : www.goldenpeacockmm.com ◾️◾️ ...
♻♻♻ အိမ်ခြံမြေ စာချုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင် ♻♻♻♻
♻♻♻ အိမ်ခြံမြေ စာချုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင် ♻♻♻♻ အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအဝယ်အငှား စာချုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင် စာချုပ်မှာ ဖော်ပြ ရ မယ့် ရက်စွဲ၊ လက်မှတ်၊ ဆက်ခံသူတွေ စတဲ့ သိသင့်တဲ့ အချက်တွေရှိပါတယ်။ ရက်စွဲမပါတဲ့ စာချုပ် စာချုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင် ရက်စွဲမပါတာဟာ ကာလသတ်မှတ်ချက် ဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ စာချုပ်မှာ ‘စာချုပ်ပြုလုပ်တဲ့ အချိန်ကစပြီး ရှစ်လနဲ့ အပြီးတိုက်ကို ဆောက်လုပ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ကန်ထရိုက်တာက တာဝန်ယူပါသည်’ လို. ပါရှိပေမဲ့လည်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ ရက်စွဲ မထည့်သွင်းထားပါဘူး။ ဒါကြောင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကစပြီး ဘယ်နှစ်လ အတွင်း အပြီးဆောက်မယ် ဆိုပေမဲ့ စာချုပ်ချုပ်တဲ့ ရက်စွဲမပါတာကြောင့် အပြီး ဆောက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ကာလကို သတ်မှတ်ရခက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် အရစ်ကျစနစ်နဲ. ငွေပေးချေရတဲ့ စာချုပ်တွေမှာလည်း ‘စာချုပ်ချုပ် ဆိုတဲ့နေ့ကနေ ၁၅ရက်မြောက်နေ့မှာ ပထမရစ်၊ ၃၀ရက်နေ့မှာ ဒုတိယအရစ်ကို ဝယ်သူက ရောင်းသူကို အပြီး ပေးချေရမယ်’ ဆိုပြီး ချုပ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲသည်စာချုပ်မှာ ချုပ်တဲ့ ရက်စွဲ မပါ တာကြောင့် ...
စမ်းချောင်းသီးသန့် ဌားရန် ရှိပါသည်... ၁။ဇလွန်လမ်း...၁၂ပေခွဲ ၅၀ပေ. ၃လွှာ ကြွေပြားခင်း ၂ သိန်းခွဲ ၂။ပုသိမ်လမ်း...၁၂ပေခွဲ ၅၀ပေ. ၆လွှာ အခင်း..အခန်း..Aircon. ၃ သိန်း ၃။သီရိလမ်း...၁၅ပေ. ၅၄ပေ. ၄လွှာ အခင်း..အခန်း..သံပန်း ၃ သိန်း ၄။ဇေယျဝတီလမ်း...၂၅ပေ. ၅၀ပေ. ၆လွှာ အခန်း၁ခန်း ၃ သိန်း ၅။ဇလွန်လမ်း...၁၂ပေခွဲ ၅၀ပေ. ပထမထပ် အခင်း အခန်း ၂ သိန်းခွဲ ၆။ဝေဠုဝန်လမ်း...၁၂ပေခွဲ ၅၀ပေ. ပထမထပ် ထပ်ခိုးပါ ပြင်ဆင်ပြီး ၂ သိန်းခွဲ ၇။ကြံခင်းလမ်း...၁၂ပေခွဲ ၅၀ပေ. ၃လွှာ Hall. ၂ သိန်းခွဲ ၈။သံတံတားလမ်း...၁၂ပေခွဲ ၅၀ပေ. ၃လွှာ ပြင်ဆင်ပြီး ၂ သိန်းခွဲ ၉။ဇလွန်လမ်း...၁၂ပေခွဲ ၅၀ပေ. ၄လွှာ အခင်းပါ ၂ ...
- Shared by စမ်းချောင်းအကျိုးဆောင် Read More
** ​ရွှေမိုး​ကောင်း Condoမှ ​ဈေးနှုန်းတန်​အခန်းတစ်​ခန်း အမြန်​​ရောင်းမည်​ **
** ​ရွှေမိုး​ကောင်း Condoမှ ​ဈေးနှုန်းတန်​အခန်းတစ်​ခန်း အမြန်​​ရောင်းမည်​ ** _____________________________________________________________ ရန်​ကုန်​မြို့၏ အချက်​အချာကျ​သော​နေရာတွင်​ရှိပြီး ရန်​ကင်းမြို့နယ်​ရှိ မိုး​ကောင်းလမ်းမကြီး၊ ​အောင်​​ဇေယျလမ်း၊ မဂ္ဂင်​လမ်း​ထောင့်​တွင်​ရှိ​သော ​``ရွှေမိုး​ကောင်း Condo´´မှ ​ဈေးနှုန်းတန်​အခန်းတစ်​ခန်း အမြန်​​ရောင်းမည်​။ > (2000Sqft) > Master(1), Single(2) > (3100သိန်း) (Nego) Mobile - 09799991090, 09799991092, 09799991095 Viber - 09253251133 Gmail - rabbitfamilyrealestate@gmail.com Website - rabbitfamily.com # Real Estate # # Property # # Land & house # ** အထက်ဖော်ပြပါ Data များအပြင် ``ယုန်မိသားစု´´ တွင် မြို့နယ်စုံအချက်အလက် များစွာရှိသည့်အတွက် မိတ်ဆွေတို့ လိုအပ်သည့်မြို့နယ်၊ လိုချင်သည့်အကျယ်အဝန်း၊ ငွေပမာဏတို့အား ဖုန်းလေးတစ်ချက်သာ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ ယုန်မိသားစုမှ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားပါမည်၊၊ ** ...
🍀 ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် 🍀 S ( 1154 )
🍀 ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် 🍀 S ( 1154 ) ➡️ Master Room (4) ခန်း , Single Room ( 1 ) ခန်း 🔹 အေးသုခလမ်းတင် ( 50 x 55 ) ကြား 💸 သိန်း ( 1850 ) တန် 📏 ပေအကျယ် ( 40 x 60 ) , အနောက်လှည့် ( ဂရန် ) 🏠 RC (3) ထပ် ရောင်းမည် 🌸 ရွိုင်ရယ်ထွန်းသစ္စာအိမ်ခြံမြေ 🌸 📞 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 ...
#ဈေးတန် လုံးချင်းအရောင်း #HousingForSale -တောင်ဥက္ကလညပမြို့နယ် -ဝေဇယန်တာလမ်းမကြီး ဂုတ်ကွက် -ငွေကြာယံ ရိပ်သာ -40×60 -2RC Building -2Master Room -1Singel Room -ဧည့်ခန်း -ဘုရားခန်း -ပါကေးခင်း -အသင့်နေ -ဂရံအမည်ပေါက် #ဈေးနှုန်း 5500 သိန်း ဆက်သွယ်ရန် 09 777969010 09 777969020 09 423675387(Viber) သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည် ...
~ Professionally Decorated ~ 【Followed by English message】 ⏩ အိမ်ခြံမြေစာရင်းအမှတ် > ( RN - 12621 ) ⛅⛅ ခြံကျယ်ကျယ် အိမ်ကောင်းကောင်ကို ရှာနေသူတို့အတွက် ဗဟန်းက ၂ ထပ်တိုက်လုံးချင်းလေးတင်ပေးမယ်နော်...... နေရာ - ဗဟန်း မြို့နယ် အဆောက်အဦးအမျိုးအစား - လုံချင်း အလွှာ - ၂ ထပ်တိုက်လုံးချင်း အခန်းအမျိုးအစား - Master Room ၃ ခန်း / Maid Room ၁ ခန်း အကျယ်အ၀န်း - ၅၀၀၀ စတုရန်းပေ (မြေ) / ၄၈၀၀ စတုရန်းပေ ( ၂ ထပ်တိုက်လုံးချင်း) 💰 အငှား ဈေးနှုန်း - ဒေါ်လာ ၂၅၀၀ (ညှိနှိုင်း) (တစ်လ အငှား) ✅ ပါဝင်သောဝန်ဆောင်မှုများ - ⛅ ပရိဘောဂ အပြည့်အစုံ ⛅ ၀ရံတာ ⛅ လေအေးပေးစက် ၆ လုံး ⛅ ကားပါကင် ⛅ Small Garden တို့ပါဝင်ပါသည်။ 🚘 Holiday စားသောက်ဆိုင်၊ g & g စတိုး၊ သျှင်ပါဂူ ဆေးရုံ တို့နှင့်နီးပါသည်။ နေရာကောင်းတွင်တည်ရှိသောကြောင့် မိသားစုနေထိုင်ရန် သာမကရုံးခန်းဖွင့်ရန်ပါသင့်တော်ပါသည်။ ✆﻿ : ဆက်သွယ်ရန် - 📞 09 458285095 📞 09 458255805 (Viber) 📩 moom-estate@gzeal.co.jp 📩 http://www.moom-estate.com/mm/ ⏩ Property Number > ( RN ...
cheapest price of house for rent🔶🔷🔶
cheapest price of house for rent🔶🔷🔶 🎞🎞🎞🎞🎞 Location-- Yadana road, Malika Housing,Thingangyun tsp. 🎞🎞🎞🎞🎞🎞 🏝37×70(land size) 🏝25×45(house size) 🏝2 Rc 🏝2 Master Bedroom , 1 Single Bedroom 🏝4 Aircon 🏝2 Living rooms 🏝Fully Furnished 🏝Generator 🏝Fully decorated 🏝24 hour security 🛑🛑 Rental fee*15 lakh(nego) Pyae Sone(Yangon House) Real Estate 095034253,09258888680 ...
- Shared by Yangon House Rental Read More
လုံးခြင်း၊ Condo၊ တိုက်ခန်းများအား အတန်ဆုံး
လုံးခြင်း၊ Condo၊ တိုက်ခန်းများအား အတန်ဆုံး နှင့် အမြန်ဆုံးရောင်းချမည့် အိမ်ခြံမြေပြပွဲကြီး ဖြစ်သောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့အား ကြွရောက်လေ့လာ ဝယ်ယူဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော် ...
✴ပထမဦးစားပေးကကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ရန်ကင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် မိန်းလမ်းမတန်းကျယ်ပေါ်မှာလည်းဖြစ် အဲဒိအပြင်မှာကိုကားပါကင်ကျယ်အိမ်ကကောင်းလမ်းနဘူးသားပါအထူးကျယ်လွန်းကောင်းလွန်းတဲ့ထိပ်တန်းနေရာကောင်းမှာဆိုတော့ ရုံးသမားစီးပွားရေးလုပ်လိုသူများအတွက်တော့ပြီးပြီပေါ့✴✴✴ ရန်ကင်း နေရာကောင်းလုံးချင်းအငှား🔶🔷🔶🔷 ကျောက်ကုန်း လမ်းတန်းမပေါ်/ရန်ကင်းမြို့နယ် 🎞🎞🎞🎞🎞 Company Office,Pre School, Private School, Showroom, Beauty Saloon, များ ဖွင့်ရန်နေရာကောင်း 🎞🎞🎞🎞🎞🎞 🏝60’ x 90’ 🏝2RC 🏝5 Master bedroom,3Single bedroom 🏝Living room, Dinning room, Kitchen room, Meeting room, Servant quarter 🏝ကျွန်းပါကေးခင်း,ကြွေပြားခင်း/ကပ်, ရေပူရေအေး, ဘိုထိုင်အိမ်သာ 🏝Aircon-5 🏝ကြိုးဖုန်း, ကားပါကင် 🛑🛑 အငှား * တလ *37 သိန်း (ညို့နှိုင်း) 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸 အိမ်ခြံမြေ၊ကွန်ဒို၊တိုက်ခန်း၊လုံးချင်း၊စက်မှုဇုံတို့အား (ရောင်း၊ဝယ်၊ငှား)ဝယ်လိုရောင်းလိုငှားရမ်းအပ်နှံလိုပါက မိမိတို့ 🏨ပြည့်စုံ(YANGON ...
ရောင်းမည် လိပ်စာ-ပထမထပ်၊သုဝဏ္ဏ၊ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက် အကျယ်-13' 55 အိပ်ခန်းတစ်ခန်း၊ဘိုထိုင် တစ်အိမ်လုံး ပါကေးခင်းပြီး မီးဖိုချောင် ကြွေပြားခင်းပြီး မီးကြိုးများ အသစ်တပ်ပြီး ဆိုဖာဆက်တီနှင့် ဗီရို ၂လုံးပါ ဈေးနှုန်း-350သိန်း ဆက်သွယ်ရန်-0943083990 ...
🇬🇧🇬🇧**English Language describe below..., Condo For Rent.⤵️⤵️ 🎉🎉** လမ်းမတန်းတွင်ရှိပြီး ရုံးခန်းဖွင့်ရန်သင့်တော်သော Luxury Condo အငှားစာရင်းများ..**🎉🎉 1. ဗဟန်း၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းမ Condo 1400 Sqft Master bedroom 1, Normal bedroom 1, အဲကွန်း(၄)လုံး7သိန်း(ညှိနှိုင်း) ( CR-048545) 2. လမ်းမတော်၊ ဝါးတန်းလမ်း Condo 2500 Sqft Master bedroom 1, Normal bedroom 1, ကျွန်းပါကေး 11 သိန်း(ညှိနှိုင်း) ( CR-049238) 3. ပန်းဘဲတန်း၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း Condo(ရုံးခန်းဖွင့်ရန်သင့်တော်) 1800 Sqft Master bedroom 1, Normal bedroom 1, ပါကေး 12 သိန်း(ညှိနှိုင်း) ( CR-049261) 👇👇 အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ်လေးနှိပ်ပြီး ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 👇👇 ☎️☎️☎️Tel : 09- 5148486/09-785148486/01-9317833 📞📞 24 Hour Hot Line : 09- 450058012 🌐🌐 Website : www.goldenpeacockmm.com ◾️◾️ #GoldenPeacockRealEstate ...
""" လယ်ယာမြေကို အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရာမှာ တရားဝင်ဖြစ်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာ သိလိုပါတယ် """ ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာ လယ်ယာမြေကို အရပ်စာချုပ်နဲ့ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နေတာ ဓလေ့ တစ်ခုလိုဖြစ်နေ ပါတယ် ။ ပုံစံ ၇ ရှိသည်ဖြစ်စေ ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ အရောင်းအ၀ယ် လုပ်တာ တရားဝင်ပါသလား။ လယ်ယာမြေကို အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရာမှာ တရားဝင်ဖြစ်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာ သိလိုပါတယ် ။ လယ်ယာမြေကို အရပ်စာချုပ်နဲ့ အရောင်းအ၀ယ် လုပ်နေတာ တရားဝင်သလား၊ ပုံစံ ၇ ရှိ ရှိ မရှိ ရှိ လယ်ယာမြေကို အရောင်းအ၀ယ် လုပ်လို့ ရသလား လို့ မေးလာရင် ပြန်ဖြေရမဲ့ အဖြေ က တိုတိုလေးပါဘဲ။ အရပ်စာချုပ်ဖြင့် ရောင်းဝယ်ခြင်းသည် တရား မ၀င်ပါ။ ပုံစံ ၇ မရှိသည့် လယ်ယာမြေကို ရောင်းဝယ် လွှဲပြောင်းခွင့် မရှိပါလို့ဘဲ ဖြေရပါမယ်။ လယ်ယာမြေတွေ ရောင်းဝယ်လွှဲပြောင်းနေတာ မှန်ပါတယ်။ လယ်ယာမြေဥပဒေက လယ် ယာမြေကို ရောင်းဝယ်ခွင့် ပေးတာ မဟုတ်ဘဲ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် Right to Use the Farmland ကိုသာ လွှဲပြောင်းရောင်းဝယ်ခွင့် ပေးထားတာပါ။ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် တစ်နည်းဆိုသော် ...
🇬🇧🇬🇧**English Language describe below..., Condo For Rent.⤵️⤵️ 🎉🎉**ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဖိုးစိန် Condo တွင်အခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။ **🎉🎉 * ဈေးနှုန်း - US 1000(ညှိနှိုင်း)💰💰 * အကျယ်အဝန်း - 1650 Sqft ပြင်ဆင်မှု _ မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း🛌🛌 _ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း _ အဲကွန်း(၄)လုံး _ ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ *သွားလာရလွယ်ကူပြီး နေထိုင်ရန်ကောင်းသောနေရာ။ ( CR-044216) 👇👇 အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ်လေးနှိပ်ပြီး ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 👇👇 ☎️☎️☎️Tel : 09- 5148486/09-785148486/01-9317833 📞📞 24 Hour Hot Line : 09- 450058012 🌐🌐 Website : www.goldenpeacockmm.com ◾️◾️ #GoldenPeacockRealEstate ## ----------------------------------------------------------------------------- 🎉🎉** Phoe Sein Condo For Rent In Baha Township.,**🎉🎉 * Price - US 1000(nego)💰💰 * Living area : 1650 Sqft * Includes; - 1 Master bedroom,2Normal bedrooms🛌🛌 - (4) numbers of air-cons ...
Land and House for rent #2000USD Minimum One Year Contract. - Land size 110’ x 90’ -2Master -2Single - 1 Bath -2Car Garage -6Brand New AC units - Newly Painted inside and out. - Fully modernize energy efficient LED home lighting. - Daylight and moonlight(warm white) lighting option in living room, dining room, family room and master bedroom. - Granite flooring downstair. - Teak parquet flooring upstair. - Spacious living area and dining space. - Cozy family room upstair with balcony. - Clean municipal water supply and well water. - Plenty of Parking space for up to 12 cars easily and backyard toilet for the drivers. Included Furniture and appliances. 1 Teakwood dining table set for six, 1 refrigerator and2burner Renai gas hob.4Teakwood cabinets for clothes. Optional Electric Generator. Rental Price - 2000 USD Ph - 09779771193 Ph - 0943077610 ( viber and whatsapp ok) Ph ...
🇬🇧🇬🇧**English Language describe below..., Condo For Rent.⤵️⤵️ 🎉🎉** လှိုင်မြို့နယ်၊ Golden Parami Condo တွင်အခန်းငှားမည်။**🎉🎉 * ဈေးနှုန်း - US 1500(ညှိနှိုင်း)💰💰 * အကျယ်အဝန်း - 750 Sqft ပြင်ဆင်မှု _ မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း🛌🛌 _ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း _ အဲကွန်း(၅)လုံး _ ပါကေး _ ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ *သွားလာရလွယ်ကူပြီး နေထိုင်ရန်ကောင်းသောနေရာ။ ( CR-049226) 👇👇 အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ်လေးနှိပ်ပြီး ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 👇👇 ☎️☎️☎️Tel : 09- 5148486/09-785148486/01-9317833 📞📞 24 Hour Hot Line : 09- 450058012 🌐🌐 Website : www.goldenpeacockmm.com ◾️◾️ #GoldenPeacockRealEstate ## ----------------------------------------------------------------------------- 🎉🎉** Golden Parami Condo For Rent In Hlaing Township., **🎉🎉 * Price - US 1500(nego)💰💰 * Living area : 1500 Sqft * Includes; - 1 Master bedroom,2Normal bedrooms🛌🛌 - (5) numbers of ...
LT1908006084: Landed house for rent in Bahan * Location - Bahan * Land size - 2,500 sq-ft (50x50) *3storey house * Living area - 6,000 sq-ft *2master bedrooms *3single bedrooms * Living room, dining and kitchen * Roof top *3bathrooms * Bathtub * Unfurnished/ Fully furnished * Parquet and tile flooring * Air cons * Back up generator * Safety Car Parking * Balcony * Can use as residential or office * USD 4,500 per month for fully furnished Address : Inya Myaing Stree Please Call For Viewing☎️📞 09 796201406 01 860 5255/56 enquiries@ypf.com.mm ...
🎉🎉** မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းသွယ်တွင် မြေကွက်ကျယ်ရောင်းရန်ရှိပါသည်။ **🎉🎉
🎉🎉** မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းသွယ်တွင် မြေကွက်ကျယ်ရောင်းရန်ရှိပါသည်။ **🎉🎉 _ ပေ(78×65) _ ဂရန် အမည်ပေါက်(မြေသီးသန့်) * ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမကြီးလမ်းသွယ်၊ နေရာကောင်း။ ** ဈေးနှုန်း - သိန်း 1500(ညှိနှိုင်း) **💰💰 ( LS-049267) -------------------------------------------------- 👇 အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ်လေးနှိပ်ပြီး ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 👇 ☎️☎️☎️Tel : 09- 5148486/09-785148486/01-9317833 📞📞 24 Hour Hot Line : 09- 450058012 🌐🌐 Website : www.goldenpeacockmm.com ◾️◾️ #GoldenPeacockRealEstate ## ...
Code/116-2918 မရမ်းကုန်းမြို့နယ်​ လုံးချင်းအိမ်ဌားမည် Fully Furnished ဌား - တစ်လ - $ 2000 (ညှိနှိုင်း)9Mile ပြည်​လမ်းမကြီးအနီး လမ်းသွယ်​ အကျယ်​ - 80' × 70' ​ပေ2RC3Master Bedrooms,2 Single Bedrooms 1 Dinning room,1 Kitchen room Aircons Water Heater တစ်​အိမ်​လုံးကျွန်းပါ​ကေးခင်း အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးအသင့်နေ Pls let us know about this ad code. #Shwe Myanmar Property real estate# ☎09 5036616(Viber,WhatsApp,LINE) 0995 5036616(Viber,WhatsApp,LINE) ...
🇬🇧🇬🇧**Elgnish Language describe below..., Condo For Rent.⤵️⤵️
🇬🇧🇬🇧**Elgnish Language describe below..., Condo For Rent.⤵️⤵️ 🎉🎉** (၈)သိန်းဝန်းကျင်ဖြင့် အချက်အချာကျပြီး သွားလာရေးလွယ်ကူသော ရုံးခန်းဖွင့်/လူနေသင့်တော်သော ကွန်ဒိုအငှားစာရင်းများ...**🎉🎉 1. တောင်ဥက္ကလာ၊ ဗြဟ္မစိုရ်လမ်း Condo ☄️1100 sqft မာစတာအိပ်ခန်း (၁)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ကားပါကင်၊ ပါကေးခင်း၊ အဲကွန်း (၂)လုံး ☄️6 သိန်း (ညှိနှိုင်း) (CR-048500) 2. လှိုင်၊ လွတ်လပ်ရေးလမ်း Condo ☄️1500 sqft မာစတာအိပ်ခန်း (၁)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ ပါကေးခင်း၊ အဲကွန်း(၄)လုံး ☄️7 သိန်း (ညှိနှိုင်း) (CR-048383) 3. စမ်းချောင်း၊ ရန်ကင်းလမ်း Condo ☄️1250 sqft ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၃)ခန်း၊ အဲကွန်း(၃)လုံး၊ ကြွေပြားခင်း ☄️7 သိန်း (ညှိနှိုင်း) (CR-048716) 4. ဗဟန်း၊ ဥဿဖရားလမ်း Condo ☄️1100 sqft မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ပါကေးခင်း၊ အဲကွန်း(၃)လုံး၊ ကားပါကင် ☄️8 သိန်း (ညှိနှိုင်း) (CR-048578) 5. လှိုင်၊ Golden Oak Condo ☄️1500 sqft မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ...
‼️လက်ရှိ ရန်ကုန်မြို့ တွင် လူအကြိုက်အများဆုံး ကွန်ဒိုမီနီယမ် (၄)ခု ကိုတောင်ကြီးမြို့ သို့YPF Agency မှ ယူဆောင်လာပါပြီ။‼️
‼️လက်ရှိ ရန်ကုန်မြို့ တွင် လူအကြိုက်အများဆုံး ကွန်ဒိုမီနီယမ် (၄)ခု ကိုတောင်ကြီးမြို့ သို့YPF Agency မှ ယူဆောင်လာပါပြီ။‼️ 𝐄𝐦𝐞𝐫𝐚𝐥𝐝 𝐁𝐚𝐲 𝟕 𝐌𝐢𝐥𝐞𝐬 𝐒𝐤𝐲𝐬𝐮𝐢𝐭𝐞 𝐊𝐚𝐧𝐛𝐚𝐞 𝐓𝐨𝐰𝐞𝐫 ✅ ဘာကြောင့်လူကြိုက်များနေရတာလဲ? အဓိက အချက် (၃)ချက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 ကွန်ဒိုအခန်း ၀ယ်မယ်ဆိုရင် အဓိကအချက်အနေဖြင့် စဉ်းစားရမှာက နေရာ ဖြစ်ပါတယ်... အခုရောင်းချပေးသွားမယ့် ကွန်ဒို (၄)ခု၏ နေရာတွေက ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ Downtown, CBD, Main Road အစရှိတယ့်နေရာများတွင် ဆောက်လုပ်ထားပါတယ် 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞 ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် ဈေးနှန်း ပဲဖြစ်ပါတယ်... ရောင်းချပေးသွားမည့် ကွန်ဒို (၄)ခုစလုံးသည် ပေးရတယ့် ဈေးနှင့် quality ပိုင်း တစ်ထပ်တည်းကျသည့် အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ 𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐎𝐰𝐧𝐞𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ ကိုယ်ဝယ်ယူထားပြီးရင် အလွယ်တကူ ပြန်လည် ငှားနိုင်ရဲ့ လား၊ မြေခိုင်မာမှုရှိရဲ့ လား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်. ✅ ဒီပွဲမှာ အထူးဈေးနှုန်း၊ ...
🎉🎉** မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကုန်းမြင့်ရိပ်သာတွင် အိမ်ကောင်းကောင်းရောင်းရန်ရှိသည်။ **🎉🎉
🎉🎉** မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကုန်းမြင့်ရိပ်သာတွင် အိမ်ကောင်းကောင်းရောင်းရန်ရှိသည်။ **🎉🎉 ✅ ပေ(47×78) ✅ ဘိုးဘွားပိုင် ✅ RC-2(ပြင်ဆင်ပြီး) ✅ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း။ ✅** ဈေးနှုန်း - သိန်း 9000(ညှိနှိုင်း) **💰💰 ( HS-049058) ************************************ 👇 အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ်လေးနှိပ်ပြီး ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 👇 ☎️☎️☎️Tel : 09- 5148486/09-785148486/01-9317833 📞📞 24 Hour Hot Line : 09- 450058012 🌐🌐 Website : www.goldenpeacockmm.com ◾️◾️ #GoldenPeacockRealEstate ## ...
🎉🎉** မြို့နယ်စုံတွင် ရောင်းရန်ရှိသော အိမ်ကောင်း/နေရာကောင်း လုံးချင်း၊ မြေကွက်အရောင်းစာရင်းများ..**🎉🎉
🎉🎉** မြို့နယ်စုံတွင် ရောင်းရန်ရှိသော အိမ်ကောင်း/နေရာကောင်း လုံးချင်း၊ မြေကွက်အရောင်းစာရင်းများ..**🎉🎉 1. သာကေတ၊ မာန်ပြေလမ်းသန့် ✴️ ပေ(40×60) ✴️ ဂရန်အမည်ပေါက်( BN-1) ✴️** ဈေးနှုန်း - သိန်း 1500(ညှိနှိုင်း) **💰💰 ( HS-044390) ----------------------------------- 2. လှိုင်၊ အောင်ဓမ္မရိပ်သာ ✴️ ပေ(50×90) ✴️ ဂရန် အမည်ပေါက်(RC-1) ✴️** ဈေးနှုန်း - သိန်း 4500(ညှိနှိုင်း) **💰💰 ( HS-046455) ------------------------------------ 3. သာကေတ၊ မြခွာညိုအိမ်ရာ ✴️ ပေ(50×60) ✴️ ဂရန် အမည်ပေါက်(RC-2) ✴️** ဈေနှုန်း - သိန်း 5500(ညှိနှိုင်း) **💰💰 ( HS-047224) ----------------------------------- 4. ကမာရွတ်၊ အောင်မြေသာစည်အိမ်ရာ ✴️ ပေ(61×74) ✴️ ဂရန်အမည်ပေါက်(မြေသီးသန့်) ✴️** ဈေးနှုန်း - သိန်း 7800(ညှိနှိုင်း) **💰💰 ( LS-046454) ---------------------------------- 5. လှိုင်၊ ဓမ္မသုခကျောင်းလမ်း ✴️ 8250 Sqft ✴️ ဘိုးဘွားပိုင်( RC-1) ✴️** ဈေးနှုန်း - သိန်း 9000(ညှိနှိုင်း) **💰💰 ( ...
** မင်္ဂလာပါ **
** မင်္ဂလာပါ ** ____________ ရန်​ကုန်​မြို့၏အချက်​အချာကျ​သော​နေရာတွင်​ရှိပြီး ဗိုလ်​တစ်​​ထောင်​မြို့နယ်​ရှိ ​ဗိုလ်​တစ်​​ထောင်​ဘုရား၊ Ocean, မြို့ထဲသို့သွားလာရန်​လွယ်​ကူ​သော `` Time Squar Condo ´´မှ ​​ဈေးနှုန်းတန်​အခန်းတစ်​ခန်း ​အမြန်​​ဌားမည်​။ > (650Sqft) > Master (1), Single (1) ,Fully Furnished > Foreigner ( $500) > Local (6 သိန်း) Mobile - 09799991090, 09799991092, 09799991095 Viber - 09253251133 Gmail - rabbitfamilyrealestate@gmail.com Website - rabbitfamily.com # Real Estate # # Property # # Land & house # ** အထက်ဖော်ပြပါ Data များအပြင် ``ယုန်မိသားစု´´ တွင် မြို့နယ်စုံအချက်အလက် များစွာရှိသည့်အတွက် မိတ်ဆွေတို့ လိုအပ်သည့်မြို့နယ်၊ လိုချင်သည့်အကျယ်အဝန်း၊ ငွေပမာဏတို့အား ဖုန်းလေးတစ်ချက်သာ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ ယုန်မိသားစုမှ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားပါမည်၊၊ ** ...
🏘ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသော လုံးချင်းအိမ်ငှါးရန်🏘
🏘ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသော လုံးချင်းအိမ်ငှါးရန်🏘 ------------------------------------------------------------------------- 🚶‍♀️🏡သွားလာရလွယ်ကူသော ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်း တို့ကလဲ ၀င်လို့ရပြီး အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသော နေချင်စရာလုံးချင်အိမ်လေးဖြစ်သောကြောင့် မိသားစုနေထိုင်လိုသူများ နှင့် ရုံးခန်းဖွင့်ရန် အတွက် အထူးအထူးကောင်းမွန်သော လုံးချင်းအိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်......🏡🥰 -------------------------------------------------------------------------- 🍀လုံးချင်းအိမ်အတွင်းပါဝင်မှုများ🍀 ---------------------------------------- 👉မာစတာအိပ်ခန်း (၈) ခန်း 👉 ရိုးရိုးအိပ်ခန်း (၂) ခန်း 👉 အဲကွန်း (၇) လုံး 👉အကျယ် (50'x100') စတုရန်းပေ 🍀💰💰တလငှါးရမ်းခ (50) သိန်း💰💰🍀 ------------------------------------------------------------------------- 🎉👉 အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များကိုဆက်သွယ်စုံးစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်... 👇👇👇 📞 09 797 990 ...
*** ယုန်​မိသားစု *** အိမ်​၊ ခြံ၊ ​မြေအကျိုး​ဆောင်​ကုမ္ပဏီမှ
*** ယုန်​မိသားစု *** အိမ်​၊ ခြံ၊ ​မြေအကျိုး​ဆောင်​ကုမ္ပဏီမှ `` ဝန်​ထမ်းအမြန်​အလိုရှိသည်​´´ > အိမ်​ခြံ​မြေ(အလုပ်​သင်​)Marketing ကျား/မ(၁၀)ဦး _ ကိုယ်​ပိုင်​စီးပွား​ရေးလုပ်​ငန်းတစ်​ခုကဲ့သို့ လုပ်​ကိုင်​နိုင်​ပြီး၊ မိမိ၏ ကြိုးစားအားထုတ်​မှုအလိုက်​ ဝင်​​ငွေ​ကောင်းစွာ ရှာ​ဖွေနိုင်​သည့်​လုပ်​ငန်း။ _ လုပ်​ငန်းအ​တွေ့အကြုံရှိရန်​ မလိုအပ်​ဘဲ (အိမ်​၊ခြံ၊​မြေ)လုပ်​ငန်းကို စိတ်​ပါဝင်​စား၍ ​ရေရှည်​လက်​တွဲ လုပ်​ကိုင်​နိုင်​သူ။ _ အသက်​(၃၅)နှစ်​​အောက်​၊ ကျန်းမာ​ရေး​ကောင်းမွန်​၍ စကား​ပြော သွက်​လက်​​ပြေပြစ်​သူ။ _ ဘွဲ့ရ(200,000/-) ၊ ဆယ်​တန်း​အောင်​ (150,000)ခံစားခွင့်​ပြုမည်​။ အမှတ်​(၃၈)၊အခန်းအမှတ်​(၃၀၁)၊၃လွှာ၊မိုး​ကောင်းလမ်း၊ ရန်​ကင်းမြို့နယ်​။ ဆက်​သွယ်​ရန်​ဖုန်း - 09799991090,09799991092,09799991095 ...
ရောင်းမည် လိပ်စာ-ဒုတိယထပ်၊သမိုင်းမြို့သစ် ၅လမ်းထိပ် အကျယ်-12.5' 50' ဈေးနျုန်း-250သိန်း ဆက်သွယ်ရန်-0943083990 ...
ရောင်းမည် လိပ်စာ-မြေညီ၊သမိုင်း ၂ရပ်ကွက်၊မုဒိတာအိမ်ယာအနီး၊ကိုးအိမ်တန်းလမ်း အကျယ်-15' 35' အိပ်ခန်းတစ်ခန်း၊အဲကွန်းတစ်လုံး တစ်အိမ်လုံး ကြွေပြားခင်းပြီး ပြတင်းပေါက်သံဗန်းတပ်ပြီး ဆန်းရျိတ်ပါ ဈေးနျုန်း-230သိန်း ဆက်သွယ်ရန်-0943083990 ...
1350sq ft with 1 master and3single room for rent and sell.2ACs, Back up generator . Car parking included. Location : downtown, very close to Shwe Dagon Pogada Rental price : $1200 negotiable Contact : 09898459663 / 09965695022 Email : smarthomerealestate73@gmail.com #YangonCondoRental #MyanmarForeignerNetwork #Condo #Residence ...
- Shared by SMART HOME REAL ESTATE Read More